यस्तो छ विश्वकै धनी बिल गे’ट्सकी छोरीको लाइफस्टाइल - Articles Nepal
यस्तो छ विश्वकै धनी बिल गे’ट्सकी छोरीको लाइफस्टाइल
विश्वकै धनी व्यक्ति हुन् विल गेट्स र उनकी पत्नी मेलिण्डा हुन् । तर यो जोडीले आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी लाइ प्राइभेट नै राखेका छन् । उनकी छोरी जेनीफर गेट्स अहिले २१ वर्षकी भइन् । उनी आफ्नो परिवारको ठ्याक्कै उल्टो छिन् । जो आफू घुमफिर गर्न सारै सोखिन कि छन् र आफ्ना फोटोहरू सोसल मिडियाहरूमा जमेर सेयर गर्छिन् । गएको वर्ष उनले आफ्नो ब्वाइफ्रेण्ड सँग कुवेत सहितका अन्य अलग अलग देशरूमा समय बिताइन । यसै दौउरानमा उनले संसारभरका घोड सवारी प्रतियोगितामा समेत भाग लिएकी थिइन् र त्यसका फोटोहरू सेयर पनि गरिन् ।
अप्रिल १९९६ मा जन्मिएकी जेनिफर बिल र मेलिण्डाका सबैभन्दा जेठी छोरी हुन् । उनका पिता जो माइक्रोसफ्टका कारण संसारभर प्रसिद्ध छन् । तर, जेनिफरलाई १४ वर्षसम्म फोन बोक्न दिइएको थिएन् । जेनिफर र उनका भाइबहिनीले आफ्ना पिताको सिएटलमा रहेको प्राइभेट लेक हाइस्कुलबाट पढाइ सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरु उच्च शिक्षाका लागि स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी गइन् । उनी घोड सवारीकै सौखिन छिन् र ६ वर्षको उमेरदेखि नै राइडिङ गरिरहेकी छिन् । उनी आफ्नो घोडाको तारिफ गरेर कहिल्यै थाक्दिनन् । उनी सुपर स्वीट र कन्फिडेन्टले भरिएकी छिन् । बिल गेट्सले उनको यो प्यासनलाई सपोर्ट गर्नका लागि फ्लोरिडाको बेलिङगटनमा एक पपर्टी खरिद गरेका छन् । यहाँ किनिएको बंगलाको मुल्य ५३ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ ।
यो बंगला पाम बीचको धेरै नजिक छ । जहाँ प्रत्येक वर्ष विन्टर इक्वेष्टेन फेस्टिबल हुने गर्छ । यो फेस्टिबलमा हरेक वर्ष ४९ राज्य, ३० देशका २ हजार ८ सय घोडा सवार प्रतिस्पर्धा गर्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको इक्वेष्ट्रेन फेडरेशनले जेनिफरलाई शो जम्पिङमा १९ औं नम्बरमा राखेको छ । उनी घोडा सवारीका सबै प्रख्यात कम्पिटीसनहरु सहभागी भइसकेकी छिन् । गेट्सले द हर्स नेटवर्कको भनेका थिए कि उनले आफ्नो स्कुल र हर्स राइडिङमा सन्तुलन बनाइसकेकी छन् । उनी भन्छिन्, यी दुवै चीजले जीवनलाई निकै ब्यस्त बनाएका छन् तर मलाई यी दुवै चीज मन पर्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस ! यि ३ राशी हुने छोरी बुहारी हुन्छन् लक्ष्मी समान, घरलाई बनाउँछन् स्व’र्ग जानिराखौ !
Previous Post: भारत र चीनका सेना बिच झडप
Next Post: कमलाको दोहोरी सुनेपछि प्रकाश सपूतले लेखे यस्तो मन छुने स्टाटस